सेती नदीको कटान रोकेर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला - Janadesh Khabar
पोखरा रंगशालाभित्र रहेको क्रिकेट मैदानलाई सुविधा सम्पन्न र व्यवस्थित गराउन गण्डकी प्रदेश सरकार१ करोड रुपैयाँ छुट्यायो भने संघीय सरकारले २ करोड । तर दुई सरकारबीच समन्वय नहुँदा काम भएन र ३ करोड रुपैयाँ फ्रिज भयो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटदेखि नै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशाला बनाउने योजना ल्याएको थियो । तर प्रदेशको नाममा एक टुक्रा जमिन थिएन ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदानको अध्ययन गर्न भन्दै आर्थिक वर्ष ०७५/०७६मा १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा त्यही शीर्षकमा ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो । तर एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेन ।
तर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशाला बनाउन जग्गा पहिचान गर्न नेपाल ओलम्पिक कमिटीका उपाध्यक्ष तेज गुरुङको संयोजकत्व बनेको ध्ययन समितिले पोखरा–३३ भरतपोखरीको पशुपतिघाटको १ सय ७४ रोपनी जग्गा उपयुक्त रहेको भन्दै सिफारिस ग¥यो । पोखरा–२९ र ३३ को सीमा सेती नदी किनारको त्यही जग्गामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट खेल मैदान बनाउन प्रदेश सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
प्रदेश सरकारको आग्रहअनुसार १० माघ २०७६ मा संघीय मन्त्रिपरिषदको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेशलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्‍यो । क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छ । बीआरएस इन्जिनियरिङ सोलुसन प्रालिले तयार पारेको डीपीआरमा सुविधासम्पन्न क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न १ अर्ब ६३ करोड लागत अनुमान गरिएको छ ।
१२३ रोपनी क्षेत्रफलमा बन्ने रंगशाला १८ हजार प्याराफिट क्षमताको हुने छ भने ७ वटा पिच बन्ने डीपीआर प्रतिवेदनमा छ । ९०० खेलाडी अट्ने कक्ष, १२० भीभीआईपी र १२ सय भीआइपी सिटरहने छ । ४ सय गाडी र ६ सय वटा मोटरसाइकल अट्ने पार्किङ बनाउन डीपीआरमा प्रस्ताव गरिएको छ । ७० सवारी अट्ने भीआइपी पार्किङ रहने छ । १ सय जना अट्ने मिडिया कक्ष रंगशालामा हुने छ ।
क्रिकेट मैदान बनाउने भनिएको जग्गाको पूर्व भाग अघिल्लो साल सेती नदीले कटान गरेको थियो । नदीले बहाव परिवर्तन गर्दा फेरि अर्को ठाउँमा हान्ने सम्भावना छ । बर्सेनि नदीले कटान गरिएको जग्गामा ठूलो बजेटको रंगशाला प्रदेश सरकारले बनाउँछ त र ?
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट आयोजनालाई बहुवर्षीय आयोजनाका रुपमा सूचीकृत गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा पठाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजप्रसाद काफ्लेले जानकारी दिए । रंगशालाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए)को प्रक्रिया अगाडि बढेको उनले बताए ।
१८ असोज २०७७, आइतवार १५:५५ बजे प्रकाशित
प्रधानमन्त्रीलाई देउवाको आग्रह–डा. केसीसँग वार्ता गर